Maxay Oromada weli faquuq u dareemayaan xitaa haddii wiilkoodii R/wasare laga dhigay? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxay Oromada weli faquuq u dareemayaan xitaa haddii wiilkoodii R/wasare laga dhigay?
Markii uu Abiy Axmed noqday ra’iisul wasaaraha Itoobiya seddex sano ka hor, bulshada Oromada waxay dareemeen in silsiladihii ugu dambeeyay ee ku xirnaa la jebiyey.
Wuxuu ka mid ahaa iyaga – wuxuu fahmay carada qowmiyada ugu tirada badan dalka ee horseeday banaanbaxyo waa weyn oo horseeday is casilaadii hogaamiyihii isaga ka horeeyay.
Wuxuu ogaa sababta ay gacmahooda isu dhaafsadaan calaamaddaas oo caan ka noqotay ciyaarihii Olombikada Rio markii orodyahankii maaradoonka ahaa ee Feyisa Lilesa uu gacmihiisa kor u taagay markii uu dhamaynayay taas oo farrin gudbinaysay.
Feyisa Lilesa uu gacmihiisa kor u taagay markii uu dhamaynayay orodka
“Dad badan waxay u arkeen [Abiy] inuu yahay Masiixi cusub,” ayuu yidhi Merera Gudina, oo ah guddoomiyaha mucaaradka Oromo Federalist Congress (OFC).
Dadka Oromada ah waxay dareemeen inay yihiin muwaadiniinta heerka labaad ah oo dalkooda ku nool.
Inta badan dadka Oromada ah waxay ku nool yihiin gobolka Oromiya, maadaama dalku u qaybsan yahay gobollo ku saleysan qowmiyado. Haddana Addis Ababa, caasimadda Itoobiya, oo ay gebi ahaanba ku wareegsan tahay Oromiya, qaar ka mid ah Oromada ayaa sheegaya in laga caroodo marka ay ku hadlaan luuqadda Oromada gaar ahaan meelaha fagaaraha ah, iyo xitaa gudaha basaska.
Jaahwareerkani wuxuu cod ka helay jiilka “qubee”, oo macnaheedu yahay “alifbeet” Afaan Oromoo kuwaas oo tixraac loo baray afkooda hooyo markii ugu horeysay, taas oo ahayd siyaasad lagu soo kordhiyay dugsiyada dalka guud ahaan horaantii 1990-meeyadii kadib dhicitaankii ee xukunkii Marxist.
“Markii ay Oromada aqoonta leh ay bilaabeen in ay isbarbar dhigaan taariikhdooda iyo taariikhaha kale sida tan Koonfur Afrika, waxay ogaadeen in jagada liidata ee ay u magacaabeen nidaamku ay tahay mid aan loo dulqaadan karin,” ayuu yidhi Faysal Rooble oo ka socda machadka daraasaadka iyo arrimaha Geeska Afrika ee fadhigiisu yahay Maraykanka.
‘Tacaddiyada la buunbuuniyey’
Waxay barteen sida casriga ah ee Itoobiya loogu aasaasay boqortooyadii Menelik II iyada oo loo maray hab gumaysi – iyo sida dhulkoodu u lumay.
Laakiin dhammaan Itoobiyaanku isku si uma wada arkaan.
Menychle Meseret, oo ah aqoonyahan ka tirsan jaamacada Gonder ayaa sheegay in sheegashooyin badan oo ku saabsan naxariis darada Menelik ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn loona buun buuniyay iyadoo laga leeyahay dano siyaasadeed.
Haween Oromo ah oo xiran dharka dhaqanka Oromada
Ka dib markii uu Abiy Axmad uu noqday ra’iisul wasaarihii ugu horreeyay Itoobiya ee ka dhashay qowmiyadda Oromada ah waxaa lagu soo dhaweeyay farxad, isbadal ayaana dhacay.
Bandhigyada Oromada ayaa lagu qabtay magaalada Addis Ababa, xafladda mahadnaqa ee Oromada ee Irreecha ayaa ka dhacday caasimadda markii ugu horreysay. Maxaabiista siyaasadeed iyo shakhsiyaadka mucaaradka ah ayaa la sii daayay , waxaa aad loo soo dhaweeyay maalqabeenka caanka ah ee warbaahinta Oromada Jawar Mohammed.
Geesi ayaa la dilay
Jiilka alifbeetada, geesigooda ayaa la dilay – waxay u horseedey mowjado kacdoonno qowmiyadeed ah, oo ay ku dhinteen dad ka badan 160 qof. sidoo kale waxaa xabsiga loo taxaabay Jawaar Maxamed oo ilaa hadda wajahaya eedeymo argagixisanimo iyo hurin rabshado.
“Dawlad kasta oo dimoqraadi ah waa inay xornimo siiso shacabka balse hadan waa inay sharciga xoojiso markii ay la kulanto arrimo noocaas ah.” ayuu yidhi Mr Menychle.
Hase yeeshe, saameyntii ka dhalatay ayaa keentay in Mr Jawar iyo Jabhadda Xoreynta Oromada (OLF) ay qaadacaan doorashada guud ee isbuuca soo socda.
Booskeenii siyaasadeed wuu sii yaraanayay marba marka ka sii dambeeysa. Tusaale ahaan sanadkii hore waxaan lahayn 206 xafiis oo ku yaala guud ahaan Oromiya hadana waxaan leenahay oo kaliya seddex xafiis, ayuu yiri Prof Merera oo katirsan xafiiska OFC.
Xisbiga Barwaaqo Mr Abiy (PP) wax tartan dhab ah kuma lahaan doono Oromiya. Kani waa xisbigii uu aasaasay ka dib markii uu kala diray Jabhadii Itobiya ee kacaanka (EPRDF), oo ay ku bahoobeen afar qowmiyadeed oo la aasaasay 1988 si loola dagaallamo taliskii Markis.
Waxaa xukumayay in kabadan labaatan sano Tigreega, oo ah qiyaastii 7% bulshada Itoobiya waa qodob kale oo kamid ahaa mudaaharaadkii Oromada ee xukunka ku keenay Abiy Axmed.
Mr Abiy fikradiisu waxay ahaa in la helo xisbi kala jinsiyad duwan – wadanku wuxuu leeyahay in kabadan 80 qowmiyadeed – laakiin midnimo ujeedadeedu tahay xalinta khilaafaadka qowmiyadeed.
Aragtidani waxay ku jirtaa buugiisa Medemer, oo la daabacay xilligii la bilaabay barnaamijka PP, oo ah eray af-Amxaari ah oo loo turjumi karo “isu imaatin”.
Oromada qiyaas ahaan waa 40 milyan marka loo barbardhigo 115-ka milyan ee Itoobiya.
“Ku baaqida midnimada iyo wadajirka waa wax fiican,” ayuu yidhi Mr Menychle, “maxaa yeelay hadaad aragto maanta Itoobiya, qowmiyadaha ayaa loo kala qeeybiyay ilaa halka ugu sarreysa, halkaas oo dadku ku dhimanayaan, iyagoo leh:” Ma tihid mid naga mid ah. “
Si kastaba ha noqotee, Mr Abiy wuxu udub dhexaad u ah u ahaa go’aankiisa inuu aasaaso xisbiga PP, ayuu yidhi Mr Faysal, isagoo kaashanaya xulafada Oromada ee isaga ku khilaafsan sida Lemma Megersa.
Mr Lemma ayaa isaga u magacaabay ra’iisul wasaaraha, laakiin waxaa laga ceyriyay sanadkii hore wasiirka difaaca isagoo dhaleeceeyay aasaaska PP.
Mr Faysal wuxuu oggol yahay in xisbiga PP uu albaabada u furay kooxo badan, laakiin wuxuu sheegay inay noqon karto waddo lagu soo rogo “xukun kaligiis-talis ah” – taas oo ah waxa siyaasiyiinta oromada ah ee jecel nidaamka baahsan ee federaalka cabsi gelisay.
“Wiilal xariifiin ah ayaa la wareegay,” ayuu yiri Prof Merera, isaga oo si maldahan u sheegaya sida uu u arko in Mr Abiy uu uga weecday balanqaadyadii loo sameeyay dhalinyarada Oromiya isla markaana ay la socdaan qowmiyadaha Amxaarada.
Faysal wuxuu si bareer ah u yiri: “Abiy wuxuu xaqiiqsaday in Amxaaradu gacanta ku hayso awoodda aqooneed, warbaahinta, iyo dimoqraadiyadda… wuxuu ogaaday inuu sida kaliya ee uu ku xakamayn karo Itoobiya ay tahay inuu la jaanqaado fikirka Amxaarada.”
Previous articleKummanaan qof oo ku habsaday goob laga heley qalbac dheeman ah
Next articleBERBERA Gudoomiyaha Kaluumaystada berbera oo kahdlay dhibatooyin haysta xiliyada xagaaga